आत्मरक्षाका लागि कीकबक्सींग नै उपयुक्त « KhelkudNews.com
आत्मरक्षाका लागि कीकबक्सींग नै उपयुक्त
Published On : 29 October, 2014 12:11 pm
नेपालमा कीक बक्सींग खेल पछिल्लो केही समय सक्रिय छ । पछिल्ला केही बर्ष कीक बक्सींगको प्रगती र सक्रियताको बारे नेपाल कीक बक्सींग संघका अध्यक्ष लोकेन्द्र कार्कीसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
पछिल्लो चार बर्षमा नेपाली कीक बक्सीग कुन अबस्थामा रह्यो ?
चार बर्ष अघि नाम मात्र थियो । अहिले अबस्था धेरै फेरिएको छ । राष्ट्रिय रुपमा पनि हामी सक्रिय रह्यौ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि हामी एक प्रतियोगितामा पनि हामी दोस्रो भयौ । तर पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लगायत राज्यका निकायले गर्नु पर्ने सम्मान गरेनन् । यस विचमा हामीले नेपाल भीत्रै पनि भारत र नेपालको विचमा प्रतियोगिता आयोजना गर्यौ । त्यो पनि राम्रो भयो ।
नेपालमा यो खेलमा सम्भावना कस्तो छ ?
एकदमै राम्रो सम्भावना छ । तर सबैले सपोर्ट गर्नु पर्यो । परिषद्को काम कुन खेलको सम्भावना छ ,त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्ने हो । अहिले पछिल्लो समय सबै खेलको अन्तराष्ट्रिय परिणाम देखिएकै छ । त्यसै आधारमा निती बनाइयोस भन्ने हो ।
कीकबक्सींगले यस्तो राम्रो नतीजा दिइरहेको समयमा साफ खेलमा राख्न प्रयास हुदैन ?
त्यो राज्यको निकायको काम हो । पछिल्लो समय हामीले नतीजा दिएका छौ । यसैका लागि भारतीय संघसंग राम्रो सम्बन्ध राखेका छौ । अब सबैले यसमा ध्यान दिए नेपालको राम्रो सम्भावना देखेको छु । जहासम्म संघको प्रश्न छ, हामीले यो खेललाई ब्यापक बनाउदै छौ । सुरक्षा निकायका लागि पनि यो खेल आबस्यक ठानेका छौ । आत्मसुरक्षाका लागि सबै ठाउमा यो खेल आबस्यक छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौ र ब्यापक बनाउदै छौ ।
यो खेलको जनशक्तिको विकास कत्तिको भएको छ ?
आबस्यकता अनुसार भइरहेको छ ।
भौतीक संरचनाको नी ?
निजी क्षेत्रबाट प्रयास गरेका छौ । अब राखेपले पनि गर्छ भन्ने आश छ ।
आगामी प्रतियोगिता के के छन ्?
केही समयमै एउटा प्रतियोगिताका बारे हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हौ । तर, मिती केही पर सर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । प्राबीधीक कारणले यस्तो भएको हो । केही समय पछि नै हामी प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने छौ ।
आम खेलप्रेमीलाई के भन्नु हुन्छ त , यसखेलका बारेमा ?
कीकबक्सींग बिश्वकै उत्कृष्ट खेल हो । सुरक्षा निकायमा रहनेका लागि र अन्य सामान्य ब्यक्तिका लागि आत्म सुरक्षाका लाग यो जान्नै पर्छ । साथै स्वास्थ्यका लागि पनि यो खेल अति आबस्यक छ ।